Ma Waxaa Life on Mars? - Rule News
Ka hor bilaabay baaritaan isniinta by Agency Space Yurub, aynu eegno dib taariikhda qarniyo jir ah search for nolol on Mars
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Ma jiraa nolosha on Mars? ExoMars Trace Gas Orbiter qaadataa raadinta” waxaa qoray Stuart Clark, waayo theguardian.com on Friday 11 March 2016 08.00 UTC
Daah-of The European Space Agency ee (ESA) ExoMars Trace Gas Orbiter pride on Monday 14 March waa daqiiqad weyn ee dayax. Waxaa bilow cusub ee raadinta nolosha on Mars.
Interest in nolosha on Mars kala dib qarniyo. qarnigii 17aad ayaa astronomer Dutch Christiaan Huygens dhexmarayay in uu buugga Cosmotheoros ku saabsan shuruudaha lagama maarmaanka u ah nolosha. Oo wuxuu arkay ma jirto sabab in Mars ama meerayaasha kale lama degganaan yaabaa.
Wuxuu ku baaqay 'Planetarians' deggan iyo siiyey ra'yi ah in ay height loo Yeedhiyaa lahaa by size ee caalamka, sidaa darteed way weyn oo ku filan si ay u soc fudayd - sida aan samayn on Earth.
Qarnigii 18-William Herschel bartay Mars, ogaaney u saftay horjeeda dhalaalaya iyo haddii loo maleeyo in Calaamadayn madow on meeraha ahaayeen malaha badaha. Waxa uu u maleeyay in dhulka iyo Mars ahaayeen xoogaa la mid ah, qoraal ahaan ku kala gadashada falsafada of Society Royal in degganaa Martian "malaha raaxaysan xaalad la mid ah in ay noo gaar ah."
qarnigii A ka dib, cirbixiyeyaasha fikirradoodii wax ka duwan. Qalabbo ayaa hagaajinta waqtiga oo dhan iyo cirbixiyeyaasha arkeen waxa u muuqatay in khadadka madow si toos ah isku Xidhka 'iyo badaha' madow.
astronomer American Percival Lowell caan fikradda ah in kuwanu waxay ahaayeen kanaalada. Mars waxaa inta badan dayrin, wuxuu u maleeyey, iyo kanaalada waxay ahaayeen dadaalka god ugu dambeeyey ee dagaalka ilbaxnimada a waraabinayna ay dunida u dhimanayaan.
fikrad waxyi ayaa la siiyaa HG ​​Wells iyo sheeko ayaa Dagaalkii Caalamka, taas oo cirka ku tanaasulaan ay dagaalka guriga iyo weeraro Earth halkii.
Waxaa hadda u malayseen inayan 'kanaalada' ahaayeen saarneyn indhaha soo saaray qalabbo yar liita. Sida ugu dhakhsaha badan technology hagaagay, khadadka weligood mar dambe.
By qarnigii 20-, Falanqaynta of Mars 'jawi muujisay in waxaa jiray Dhawa joogo wax uumiga biyaha, oo ku shubtaa this bixisay in fikradda ah in halkaas joogay meydadka weyn oo biyo ah. Imaanshiyaha pride ugu horeysay ee 1960 ayaa muujiyay in ay jiraan lahaa biyaha ahayd ee la soo dhaafay fog iyo tan ugu danbeyn keentay in fikradaha hadda in nolosha microbial ayaa sameeyay yaabaa balaayiin sano ka hor iyo in laga yaabo in qaar ka mid ah ayaa weli ku dhagno on.
In 1970, laba hawlgallada Viking Nasa ee taabtay hoos on meeraha. Lander kasta oo ku jira shaybaar noolaha awood ugu leeyihiin qabashada afar tijaabo oo kala duwan in nolosha Muujin yaabaa. Inkasta oo tijaabo ah Release calaamadeeyay siiyey natiijada hore wanaagsan, waxay ku fashilantay markii noqnoqda.
The kale saddex tijaabo tusay keliya natiijooyinka xun oo si rasmi ah shaaca ka qaaday in Nasa nolosha lama ogaan karo. muran, saynisyahano qaar ka mid ah ay sii wadaan in ay ku andacoodaan in guusha hore ee tijaabada ah Release calaamadeeyay waa in loola dhaqmaa sida caddaynta nolosha.
Ayadoon eedeemahaas, Nasa ayaa dhaqaaqin ka raadinaya nolol on Mars. Halkii, ay ku urursan on baaritaan ku caddayn in Mars ahaa mar kale Earth-sida biyo dal iyo jawi ka sii dhumuc weyn.
maroojin ugu dambeeyay bilaabay serendipitously in 2003. ESA ee pride Mars Express sameeyey ogaado a gaadh ah methane in jawiga caalamka ee. Methane waa gaas-gaaban, iyo on Earth waxaa la soo saaray inta badan by lifeforms.
In 2014, Nasa ayaa rover Xiisaha sidoo kale la ogaado whiffs gaaska. Tani wararka kordhay in sacaadda waxaa jiray beelaha microbial weli nool on Mars, soo saaro gaaska. ogaanshaha dhawaan biyo socda on Mars sidoo kale baadi goob ugu tiirarka.
Si kastaba ha ahaatee, sidoo kale waxaa jira fursad ah in methane ah waxaa soo saaray geedi socodka dhulka.
taasi ExoMars Trace Gas Orbiter waxaa loogu talagalay si loo ogaado taas oo ka mid ah fursadaha waa ay u badan tahay. Waxay u ekaan doonaa gaaska la dareen arag iyo khariidada ay qaybinta guud ahaan caalamka in ka badan dhowr sano. Haddii meel si gaar ah hodan ku ah wax soo saarka methane, in uu noqon doono bartilmaameedka u ah dabiiciga ah baaritaan dheeraad ah.
On oo note, ESA waxaa diraya rover ExoMars in dusha Mars ee in 2018. Waxaa la qalabeeyay doonaa alaab muusiko oo awood u arko calaamadaha nolosha microbial ee la soo dhaafay iyo hadiyad.
search The dheer nolosha on Mars sii…
Stuart Clark waa qoraaga Lama yaqaan Caalamka The (Head of Zeus), oo co-ciidanka podcast ah Stuniverse The (bingo Productions).
Apple Watch dib u eegis: hardware qurux dhaceen by ...
19872	3 Guud ahaan caalamka, Qodobka, xiddigaha, Blogposts, Hay'adda Space Yurub, Mars, Science, network blog Science, Space, Stuart Clark
← Android N: Google MUUJIYAY Future ee OS ee HTC The Vive Pre VR headset – Review by qarka u saaran [VIDEO] →